Alshabaab oo Ciidamada Kenya Gaari ka Gubay – Radio Daljir
Alshabaab oo Ciidamada Kenya Gaari ka Gubay
Oktoobar 13, 2017 7:36 b 0
Xoogaga Ururka Al Shabaab, ayaa xalay la wareegay gaari xamuul ahaa oo saad iyo sahayba u siday Ciidanka Militariga Kenya, ee qaybta ka ah Xoogaga Nabad Ilaalinta ee Midowga Afrika.
Kolonyo ay wateen Ciidanka Kenya oo shalay ka yimid dhinaca xuduuda Kenya, kuna wajahnaa Deegaanka Buusaar, oo 40km u jira Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo, ayaa waxaa uu Gelinkii danbe ee Shalay roob xoogan uu ku hakiyay Deegaanka Budada, oo 5km u jira Ceelwaaq.
Waxa Ciidanka Kenya wadada ku xanibay, ayaa waxaa lagu sheegay, iyadoo laba ka mid ah kolonyadooda oo saad iyo sahayba waday, ay dhex fariisteen wadada, taasoo keentay in ciidankii ilaalinayay ay iyaguna halkaasi kula nagaadaan.
Wararka, ayaa waxay intaa ku darayan in Xalay ay weerar ku soo qaadeen dagaal-yahanada Ururka Al Shabaab, iyagoona goobtaasi ka jiitay mid ka mid ah gaadiidkaasi. Ciidanka Kenya waxaa la soo sheegaya in ay awoodi kari waayeen in gaariga ay ka difaacdaan Shabaabka.
Madaxweynaha Hiirshabeele oo la Wareegay Gadiid Boolis